प्रेमीले छोडेपछि रिस फेर्न कुकुरसंग विवाह गरेकी युवतीलाई पर्‍यो सोच्नै नसकिने बज्रपात !! - Babal Khabar
Thursday, September 23www.babalkhabar.com : For your kind information
प्रेमीले छोडेपछि रिस फेर्न कुकुरसंग विवाह गरेकी युवतीलाई पर्‍यो सोच्नै नसकिने बज्रपात !!
November 9, 2020 November 9, 2020 by बबाल खबर
मानिसको बदला लिने तरिका अनेक हुन्छन् । कुनै बदला यस्तो हुन्छन् जसले अर्कोलाई होइन आफैलाई अप्ठेरो बनाउँछ । एक युवतीलाई त्यस्तै भएको छ । विवाह मानव जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने नबुझेर त्यसलाई देखावटी बनाउँदा उनलाई समस्या भएको छ ।
सबै मानिसहरुले विवाहको पललाई अविस्मरणीय बनाउन चाहन्छन् तर यि युवतीले भने आफ्नो विवाहलाई विश्व चर्चित त बनाइन् तर त्यसको सकारात्मक सन्देश भने गएन । प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न नपाउँदै सम्बन्ध विग्रिएपछि आफ्ना प्रेमीलाई देखाउनकै लागि एक युवतीले कुकुरसंग विवाह गरिन् । यो घटना अर्जेन्टिनामा भएको हो । विवाहको दिन निश्चित गरिएपछि उनको प्रेमीसंग सम्बन्ध विग्रियो । उनको विवाहको एक दिन अगाडि उनको प्रेमीले उनीसंग विवाह नगर्ने निर्णय सुनाए । प्रेमीले दिएको त्यस्तो धो का को बदला उनले अनौठो तरिकाले दिने निर्णय गरिन् । प्रेमीसंग विवाह गर्न निश्चित गरिएकै साइतमा उनले कुकुरसंग विवाह गर्ने निर्णय गरिन् । *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
यो पनि कञ्चनपुरमा सिमा निरिक्षण गर्न भन्दै भारतवाट आएका सुरक्षाकर्मीलाई नेपालीले लखेटेका छन् । बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित नेपाल–भारत सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी सिमा निरिक्षणको वशानामा आएका थिए । उनीहरुलाई नेपाली स्थानियले लखेटेका हुन् । आइतबार नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबी सिमानामा आएको थियो । नेपाली सुरक्षाकर्मीसंगको समन्वय विना सिमानामा आएका एसएसबीलाई स्थानियले लेखेटि दिएका छन् । आइतबार नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबी सिमानामा आएको थियो ।
बेलौरी नगरपािलका १० का वडाध्यक्ष हरिलाल चौधरीले घटना पुष्टि गरेका छन् । बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित नेपाल–भारत पिल्लर नं ३३ देखि ३५ का सीमा स्तम्भको निरिक्षणका लािग नेपालसंग समन्वय नगरी आएका एसएसबीको टोलीलाई स्थानियले लखेटेका हुन् । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले पनि घटना पुष्टि गर्दै नेपाली पक्षसंग समन्वय नगरी आएका कारण उनीहरुले माफी समेत मागेको बताएका छन् । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले पनि घटना पुष्टि गर्दै नेपाली पक्षसंग समन्वय नगरी आएका कारण उनीहरुले माफी समेत मागेको बताएका छन् । *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
Prevमृ’त्यु भएको एक महिनापछि घटनाले लियो नयाँ मोड, श्रीमानमाथि नै एस्तो गम्भिर आरोप !! (भिडियो हेर्नुस्)
nextआफ्नै श्रीमान् ले यस्तो अवस्था बनाइएकी पुजाले खालिन् सुन्नै नसकिने हृदय विदारक घटना, एस्ता अपराधी मानिसलाई के सजाए दिने ? (भिडियो हेर्नुस्)
नेपाली तरीकाले विवाह गर्न नेदरल्याण्ड र फिलिपिन्सदेखि पोखरामा अाइपुगे यि जोडी !
नुनमा हुन्छ तपाईलाई करोड पति बनाउने शक्ति, मात्र यो उपाय अपनाउनुहोस् !
‘सक्किगोनी ’मा फर्किए ‘पाँडे’ ! अहिले सम्म कहाँ थिय जान्नुस
घरको मेन गेट अगाडी कहिले पनि नराख्नुहोस् यी कुरा, नत्र…..
यस्तो छ ‘भष्मे डन’को दाम्पत्य जीवन ! एकपटक पढनुहोला
५० बर्ष काट्न लागेकी ऐश्वर्या आखिर अहिले सम्म कसरी भईन फिट ? यस्तो छ राज !
भीष्म पितामहले बताएका थिए लामो आयुको रहस्य !
यी १२ पाप गर्ने व्यक्तिलाई भगवान शिवले कहिल्यै क्षमा गर्नुहुन्न !
आजदेखि सोह्र श्राद्ध सुरु, के के गर्न हुँदैन ? कस्ले बार्ने ?
बढ्यो सुनको भाउ : कतिमा हुँदैछ आजको कारोबार ?
अद्भुद क्षमतावान हुन्छन् यी ४ बार जन्मिने मानिस : तपाँर्इको कुन पर्यो ?
छोराले खोले फेरि फरार भएका श्रीमानको सबै रहस्य ! छोरी लिएर किन भागेका रहेछन् (भिडियो हेर्नुस्)
सिदार्थ कि सेहनाज भन्ने एकदमै भावुक गित मोहित चोप्राले गाउने बितिकै भयो भाइरल (हेर्नुस् भिडियो )
दोहोरि च्याम्पियनकी अस्मिता डल्लाकोटी माथि सबैको प्रश्न बिहे गर्नु भएको हो र बास्तबिकता के हॊ
स्वास्थ्यका लागि दूध खानु राम्रो कि दही ? जानी राखौं
मात्र १५ दि’नसम्म दहीमा मिसाएर खानुहो’स् यी चिज, ह्वात्तै घट्ने छ तौल
याै”न सम्पर्क पछि गर्नै नहुने सात काम !
यी हुन महिलामा हुनुपर्ने ३२ लक्षण, तपाईंमा के के छन् त जान्नुहोस ?
आफ्नो घरमा भाडामा बस्ने युवतीका कोठामा घरबेटीले गो’प्य क्यामेरा फिट गरेपछि..हेर्नुहोस ( भिडियो